Faah faahin:- Qarax ka dhacay garaash ku dhex yaala xarunta hay’adda UNDP ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax ka dhacay garaash ku dhex yaala xarunta hay’adda UNDP ee Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax maanta ka dhex dhacay garaash ku dhex yaala xarunta hay’adda UNDP oo ku taala inta u dhaxeeysa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo isgoyska KM-4 ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaasi ayaa la sheegayaa inuu ahaa miino mid lagu soo rakibay gaari noociisu yahay HILUX oo ay dadka soomaalida ah yaqaanaan QOOQAN, wuxuuna qarxay xilli la dhigay garaash ku dhex yaala xarunta hay’adda UNDP ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, gaariga ayaa la sheegay in markiisi hore saakay laga soo bixiyay garaash ku yaala Isgoyska KM-4 ee magaalada Muqdisho, waxaana la xaqiijiyay inay ku dhaawacantay ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada hay’adda UNDP, iyadoona sidoo kale uu burbur aad u xoogan uu gaariga soo gaaray.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha hay’adda UNDP, kaas oo ay kaga hadlayaan qaraxa ka dhex dhacay xaruntooda ku taala magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka Soomaaliya oo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa halkaasi ka bilaabay baaritaano ay ku ogaanayaan qaabka uu qaraxa u dhacay.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi, waxayna saraakiisha amniga sheegayaan in baaritaankaasi lagu soo qab-qabtay dad lagu tuhmaayo inay ku lug leeyihiin qaraxaas.
Si kastaba, qaraxaan ayaa kusoo beegmaya xilli maanta waddooyinka qaar ee magaalada Muqdisho lagu daadiyay ciidamo badan oo ka tirsan nabad-sugidda qaranka iyo kuwa booliska Soomaaliyeed, waxaana lagu wadaa in dhawaaan ay magaalada ka dhacdo doorashada xilka guddoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo labadiisa ku-xigeen.